Semalt: Ho an'ny Fampiasana Ankapobeny ho an'ny Marketing
Ao amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao dia tokony hanana ny toetran'ny namana akaiky indrindra amin'ireo mpivarotra isan-karazany ireo izay afaka manolotra azy. Ny fandrosoana amin'ny teknolojia dia nanampy ny orinasa mba hanakanana ny sarimiaina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny mailaka, ny GIF sy ny fampielezana ny merkcampagnes.
Ny tena mahagaga dia ny fisainany, ny zava-tsarobidy ho an'ny zaka? Ny fandinihana sy ny fanandramana natao dia nampiseho fa ny zava-bitany dia tena manan-danja tokoa amin'ny fampitomboana ny fahatsapana, ny fanentanana ny fanaraha-maso ary ny fanentanana ny fifampiresahana.
Frank Abagnale, manam-pahaizana Semalt , dia manome ny tena fototra izay antony tokony hikorontana anao mba hanangonana ny hetsika ao amin'ny marketing campaigns - transportversicherung umzug kosten.
Ny fivarotana ara-barotra no efa ela
Mampitombo kokoa ny mijery kokoa ny sary sy ny sary. Ny mpikirakira fanatanjahan-tena dia manamarina ny feo, ny feo sy ny solo-sainam-peo an-tsoratra. Ny lafiny rehetra amin'ny zava-misy dia hita fa misy sary vitsivitsy notendreny mba hahatonga azy ho manan-danja ho an'ny tarika, manaja ny demografie.
Ilaina ny mailaka
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy manam-potoana firesahana ny vokatra avy amin'ny vokatra na ny koopides. Alefaso imailaka amin ny namana endriny atao pirinty Fitantaràna hafa momba ny GV Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Atombohy ny resaka Ny fampihetseham-batana dia mampihetsi-po ny fahafantarana fa mila manomboka amin'ny alàlan'ny statistika, grafikônika ary ny endri-tsoratra ny informatika amin'ny fomba tsotra sy tsotra..
Afaka manampy anao koa ny manoratra ao anaty sehatra tsotra mba hamaritana ny tsipiriany hafa izay manakana ny famoahana ny gazety. Hitady namana vaovao sy mahaliana mba hampahafantarana ny mpividy ny vokatra azonao ampiasaina amin'ny alàlan'ny famoahana video manazava.
Ireo horonan-tsary dia mora tezitra sy te hamerimberina
Manana fandaharam-pianarana isika mba hihinana sy hikolokolo ireo karazan-tsarimihetsika izay noraisintsika tamin'ny ankamaroan'ny cartoon. Ny fanadihadiana dia nampiseho ireo zava-baovao vitsivitsy izay azo antoka fa voaresaka any amin'ny fampahalalam-baovao sosialy sy bilaogy. Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mampihetsi-po ny fanatanjahantena, ny fampitam-baovao ary ny fahafaha-misaina dia azo atao mba hahazoana alalana mba hahazoana alalana.
Ireo fampisehoana dia manome vola avo lenta kokoa amin'ny fitaovana hafa ara-barotra
Ny vokatra azo avy amin'ny marketing Campagne dia ny fampitomboana ny tsikombakomba sy ny varotra. Azo antoka fa misy mpitsidika mba hampidirina ao an-tsainy manokana, mitarika sy mpividy. Ny fiaraha-miasa dia tena ambony noho ny SEO-tsindrin-tsakafo toy izany eo amin'ny lafiny ara-psikolojia.
Ireto misy sora-tsoratra maromaro mba hanampy anao hahazo ny tena herin'ny maotera
Ao amin'ny lisitry ny mpilatsaka an-tsoratra ny ankamaroan'ny horonan-tsarimihetsika navoakan'ny CTR amin'ny 41%
Raha toa ka misy ny pejy tsara indrindra, dia mety hahatratra 70% ny fifandraisana an-tserasera
Ireo mpitsidika dia miteraka 100% mahery avy amin'ny lahatsary nalaina tamin'ny horonan-tsary izay hita any amin'ny tranonkala hafa
Ny horonan-tsary sy horonan-tsarimihetsika dia nahitana 12.000 mahery tamin'ny lahatsoratra, lahatsoratra sy rohy tsotra
Ny horonan-tsary mampiavaka azy
Ny fiezahan'ireo ekipa mpilalao sarimihetsika matihanina, mpaka sary sy mpihira mahery feo dia mety hahatsikaritra ho an'ny orinasa. Raha oharina amin'ny mpitsabo, ny modelina, ny kitapom-bidy, ny fakan-tsary, ny fakan-tsary, ny lamosina ary ny mpampiasa hafa izay ilaina mba hahazoana ny horonan-tsarimihetsika, ireo mpilatsaka an-tsena.
Anisan'izany ny fitaovana sy fitaovana izay ampiasaina mba hamoronana zavatra tsotra sy tsotra nefa tsy misy zavatra hafa.
Ny animation dia manana ny fahaiza-manao mba hanoratana ny orinasa. Amin'ny fampiasana azy amin'ny resaka sy ny adiresy, dia mamela ny fahafahana miditra amin'ny mediamana rehetra ary ny mpitsidika amin'izao fotoana izao mba hikarakarana ny avo indrindra amin'ny fifanoherana.